Galaxy Book S: Qeexitaannada, Qiimaha iyo Daahfurka | War gadget
Samsung Galaxy Book S: Laptop-ka cusub ee sumadda
Oo ay la socdaan telefoonnadeeda cusub ee dhamaadka sare, Samsung ayaa noo reebtay warar dheeri ah munaasabaddeeda soo bandhigista. Sumadda Kuuriya ayaa soo bandhigeysa laptop-keeda cusub Galaxy Book S. Laptop-kan ayaa loo soo bandhigay sida ugu wanaagsan ee shirkaddu illaa hadda nooga tagtay, iyagoo isku daraya kuwa ugu fiican laptop-kooda iyo taleefannadooda, sida ay sheeganayaan. Wixii ay ballan qaaddo iyo wax badan.
Waa laptop furaya nooc cusub oo ku jira buugiisa kombiyuutarka. Xaaladdan oo kale, Samsung diiradda saarayaa gaar ahaan beeraha ah dhaqdhaqaaqa iyo isku xirnaanta buuggan Galaxy Book S. Waxay raadinayaan inay nooga tagaan wax ka duwan waxa aan ku aragno laptop-yada kale ee suuqa yaalla.
Naqshadeynta laptop-ka waxay u muuqataa mid aad u wanaagsan khafiif ah, khafiif ah oo leh jajab khafiif ah. Waxaa ka go'an bilicsanaanta casriga ah, taas oo shaki la'aan codsi u diri doonta macaamiisha. Intaa waxaa dheer, heer farsamo, waxaan ka helnaa laptop xoog badan oo leh waxqabad wanaagsan.
1 Tilmaamaha Galaxy Book S
Tilmaamaha Galaxy Book S
Samsung waxay ku biirtay shirkadaha Microsoft iyo Qualcomm samaynta buug-yarahaan. Natiijadu way cadahay, waa mid ka mid ah laptop-yada ugu fiican ee nooca Kuuriya ilaa hada naga tagay. Waxqabadka wanaagsan, qaabeynta casriga ah, iyo guud ahaan tusaalooyinka wanaagsan, markaa waxay noqon doontaa laptop aad u fiican oo suuqa laga helo. Kuwani waa qeexitaannada buuxa ee Galaxy Book S:
Shaashad: 13,3-inji FHD TFT (16: 9) Shaashadda taabashada iyo xallinta 1.920 x 1.080
Processor: Qualcomm Snapdragon 8cx 7nm 64-bit Octa-core ugu badnaan 2.84 GHz + 1.8GHz
Kaydinta gudaha: 256/512 GB SSD (oo lagu ballaarin karo booska MicroSD illaa 1 TB)
Batariga: Kharashka loogu talagalay 42Wh iyo ismaamul ilaa 23 saacadood oo fiidiyow ah
Isku xirnaanta: Nano SIM, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5GHz), VHT80 MU-MIMO
Nidaamka hawlgalka: Windows 10 Home iyo / ama Pro
Kuwa kale: Dareenka faraha ee leh Windows Hello
Cabirka: 305,2 x 203,2 x 6,2-11,8 mm
Miisaanka: 0,96 kg
Mid ka mid ah dhinacyada muhiimka ah ee Galaxy Book S waa taas wuxuu adeegsadaa processor-ka Snapdragon 8cx. Waa jab muhiimad weyn u leh suuqa, kaas oo ay ku soo badanayaan noocyada laptop-yada. Waad ku mahadsan tahay, dhaqdhaqaaqa iyo isku xirnaanta taleefanka gacanta iyo awoodda kombiyuutarka waxaa laga heli karaa laptop-ka. Isku-darka ka dhigaya xiisaha weyn, si looga faa'iideysto. Waxay ku timid 8 GB RAM iyo laba isku-darka kaydinta, oo aan ballaarin karno wakhti kasta.
Shaashadda laptop-ka ayaa taabanaya, taas oo noo oggolaan doonta inaan ula falgalno siyaabo kala duwan. Faahfaahinta xiisaha buuggan 'Galaxy Book S' waa inaysan jirin taageerayaal, maxaa yeelay uma kululaanayso sida laptop-ka caadiga ah. Waxay sidoo kale nooga tageysaa ismaamul wanaagsan, sida shirkaddu shaacisay. Isku xirnaanta waxay ku shaqeysaa kiiskan 4G, markaa uma baahnin inaan ku xirno WiFi kiiskan. In kasta oo ay u malaynayso in loo baahan doono qorshe xog si awood loogu yeesho. Waxay leedahay boos loogu talagalay nano SIM, kaas oo u oggolaanaya in loo isticmaalo arrintan.
Nidaamka qalliinka ee kiiskan waa Windows 10, noocyadiisa Guriga iyo Pro, labadaba waa la heli karaa. Shirkadda ayaa xaqiijineysa sidoo kale joogitaanka dareeraha faraha, si loogu heli karo iyadoo la adeegsanayo Windows Hello. Tallaabo ammaan oo dheeri ah oo laptop-ka ah, taas oo ka hortageysa qof inuu helo ogolaansho la'aan, tusaale ahaan.
Galaxy Book S ayaa la iibin doonaa dayrtaan, sida Samsung horeyba si rasmi ah u xaqiijisay. In kasta oo ay ku sameyn doonto suuqyo la xushay, sidaa darteed xilligan la joogo ma naqaanno haddii shirkadda Kuuriya ay doonayso inay ka bilowdo Spain. Waa inaan sugnaa dhowr toddobaad si aan xog dheeraad ah uga helno arrintan.
Waxaa lagu sii daayaa laba midab: cawl iyo dahab. Dalka Mareykanka, sicirka bilowgiisu yahay isla 999 dollars, sida horeyba loogu xaqiijiyay astaanta Kuuriya. Laakiin ma ogin waxa qiimihiisu noqon doono bilowgeeda suurtagalka ah ee Yurub. Marka waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan xog dheeraad ah ka helno arrintan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Kumbuyuutarro » Samsung Galaxy Book S: Laptop-ka cusub ee sumadda